Uyisebenzisa kanjani iCD / iDrive Drive kwiLaptop yakho
Iilaptops zanamhlanje zibonelela ngeendlela ezimbini zeCD / DVD: uhlobo lweslot kunye nohlobo lwetreyi. Ngohlobo lweslot, idiski ifakwa kwislot. Ngexesha elithile, ikhompyuter ibamba idiski kwaye iyitsale ungene kuyo. Ngohlobo lwetreyi, ucofe iqhosha, kwaye itreyi yediski iphume emzimbeni weLaptop, okanye itreyi inokuvela xa usebenzisa i-Eject command kwiWindows. Ukhupha itreyi ngaphandle kwayo yonke indlela kwaye uthabathe iCD okanye iDVD kwitreyi. Emva koko ucofe itreyi uyibuyisele ngaphakathi kwi laptop.
Yintoni unyango nge-amoxicillin?
Ilaptop yakho inokuba nelebheli ekuxelela ukuba luhlobo luni lokuqhuba oluqulathe. Iidrive drive zingabhalwa njengeCD, iCompact Disc, iCD-RW, okanye iCD / R-RW, okanye enye indibaniselwano yezo. Ilizwi idiski inokuvela kwi-drive.
Iidrive DVD zisebenzisa ilogo yeDVD. Ukudibanisa iiCD / iiDVD zokuqhuba zinokusebenzisa imishmash yeelogo. Kwaye, ewe, ezinye iidrives azinakusebenzisa nayiphi na iilebheli.
Xa usebenzisa idrive yakho, nokuba ungene ngaphakathi okanye uphume, qiniseka ukuba unendawo eyaneleyo yokufaka okanye yokususa idiski. Kwitreyi yokuphuma, qiniseka ukuba uyalifumana kwaye uyalibona iqhosha elincinci ucinezela ukukhupha idiski.
seta amagama emqolo ku-r
iziphumo ebezingalindelekanga ze-niacin
Kutheni ndilambe mva nje
Wellbutrin umlinganiselo wokuyeka ukutshaya
uti kunye nosulelo lwegwele
I-diclofenac ye-sodium gel 3%